မွေးဖွားသည့် အချိန်မှပြောသော သင့်အကြောင်း “ညသန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ” ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆွေမျိုး ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုးပေးကို ရလိမ့်မည် …။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးသားချင်းများသည် ဇာတာရှင်၏ ဘ၀တွင် ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုး ပြုကြကုန်သော အဓိက ဇတ်ဆောင် များဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ မိဘမောင် ဘွားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတို့တွင် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးတွေ့ရသူများ ၊ မိဘမောင်ဘွားများ ကိုငဲ့ညှာ၍ အလွယ်တကူ အိမ်ထောင် မပြုနိုင်ဘဲ ရှိကြသူများသည် သန်းခေါင်ယံကျော်တွင် မွေးကြ သူများသာ ဖြစ်ပါသည် …
သားမက်နဲ့ သမီးကို လုပ်စားလို့ ရအောင် အစွံထုတ်နေတဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်
သားမက်နဲ့ သမီးကို လုပ်စားလို့ ရအောင် အစွံထုတ်နေတဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ဖော်ဝါရီလ ၂၄ နဲ့ ၂၅ ရက်မှာ အိန္ဒိယကို အလည်လာမယ့် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သူ့ ခရီးစဉ်မှာ ဇနီးသည်အပြင် သူ့ရဲ့ အကြီးတန်း အကြံပေး အဖြစ် ခန့် အပ်ထားတဲ့ သမီး ဖြစ်သူ အိုင်ဗန်ကာနဲ့ သားမတ် ဖြစ်သူ ဂျာရက်ခရက်ရ်ှနား တို့ကိုလည်း ခေါ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်လို့ အိမ်ဖြူတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ပါတယ် ။ ထရမ့်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မယ်လာနီယာက ဘဏ္ဍာရေး အတွင်းဝန် စတီဗင်မူချင်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အတွင်းဝန် ၀ီဘာရောစ် …
သင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံခိုင်ဘို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
နေရောင်ခံလိမ်းဆေးတွေ နေ့တိုင်းလိမ်းခဲ့တဲ့အတွက် နံရိုးကျိုးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အသက် (၂၀)အရွယ် ကောင်မလေး အသက် (၂၀)အရွယ် လူငယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ နေရောင်ခြည်ဓာတ်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ လိမ်းဆေးတွေကို နေ့တိုင်းသုံးစွဲပြီး နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ဗီတာမင်ဒီဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး နံရိုးကျိုးသွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ China Press သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဇီချန်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် (၂၀)အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံကို လာပြခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ချောင်းအဆက်မပြတ် ဆိုးနေပြီး၊ သုံးရက်ဆက်တိုက် ဆိုးအပြီးမှာ ဘယ်ဖက် ရင်ခေါင်းနားတစ်ဝိုက်က တော်တော်လေးအောင့်နေတဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် နေလို့မရ ဖြစ်နေတဲ့အဆုံး ဆေးရုံကို လာပြခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ နေရောင်ခံလိမ်းဆေးတွေ …
ဖုန်းမသုံး၊ စကားမပြောဘူးဆိုရင် တစ်နေ့ကို(၅)နာရီပဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဝန်ထမ်းတွေကို စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ
ဖုန်းမသုံး၊ စကားမပြောဘူးဆိုရင် တစ်နေ့ကို(၅)နာရီပဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဝန်ထမ်းတွေကို စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ တော်တော်များများမှာ အလုပ်လုပ် နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အလုပ်ချိန်က တစ်နေ့ကို ( ၈ ) နာရီသတ်မှတ် ထားပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ ပိတ်တာများပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာတော့ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်တည်း အပိတ်များတာလည်း ရှိပါတယ် ။ တွက်ကြည့်ရင် တစ်ပတ်ကို အလုပ်ချိန် ( ၅၆ ) နာရီလုပ်ရတဲ့ သဘောပါ ။ တစ်လဆိုရင်တော့ နာရီ ( ၂ ) ရာကျော် အလုပ်လုပ်မှ လစာ အပြည့်ရမှာပါ ။ …
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူသင့်ကိုမချစ်တော့တာ သေချာနေပါပြီ
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ချစ်သူသင့်ကိုမချစ်တော့တာ သေချာနေပါပြီ အချစ်ဆိုတာ စချစ်နေတဲ့ချိန်တွေမှာသာကောင်းကြတာပါ။နောက်ပိုင်းကြရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရိုးအီသွားကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ငြီးငွေ့သွားကြတယ်။ သူသင့်ကို ထားသွားသည့်ထိ မစောင့်ပါနဲ့။ သူသင့်ကို မချစ်တော့ဘူး၊ လမ်းခွဲချင်နေပြီးဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အပြုအမှုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအပြုအမှုတွေ ဖြစ်နေပြီးဆိုရင် သင့်ဘက်ကပဲစပြီး လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့နော် …။ (၁) သင့်ရဲ့ message တွေကိုမပြန်တော့ဘူး ဒီအချက်ကနေစပြီး ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို အပြန်အလှန်စကားပြောတာတွေ ရှိကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သင့် message တွေကိုပြန်ချင်မှ ပြန်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေဆို မပြန်တော့တဲ့ အထိတောင်ရှိနေတယ်ဆိုရင် သူသင့်ကို ငြီးငွေ့စပြုနေပါပြီး Message ပြန်ရင်တောင် တစ်လုံးလောက်ပဲ စာပြန်လာတယ် …။ သင့်ရဲ့ …
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် ကိုယ်က အားကိုးနိုင်တယ်။ ဆိုးချင်သလို ဆိုးနိုင်မယ်။ ချွဲလို့ရတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ကိုဆရာတောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနဲ့ကလေး စုံတွဲတိုင်းတော့ ဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ … ။ သေချာတာကတော့ ဦးအရွယ်တွေက ကိုယ့်ထက် ဗဟုသုတများမယ်။ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖို့ သူတို့က ဆုံးမနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦး နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. (1) သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်ပြောဆရာ ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ …
ခေါင်းမာပြီး တဇွတ်ထိုးဆန်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားရင် သိထားရမယ့် အချက် (၅) ချက်!
ခေါင်းမာပြီး တဇွတ်ထိုးဆန်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားရင် သိထားရမယ့် အချက် (၅) ချက်! အရမ်းခေါင်းမာပြီး လုပ်ချင်လာပြီဆို တားမရ၊ မလုပ်ချင်ဘူးဆို ခိုင်းမရ သိပ်ကို ဂဂျီဂဂျောင်ကျနေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်ရတာ ထင်သလောက်တော့ မခက်ခဲပါဘူး။ သူတို့လေးတွေက ခေါင်းသာမာတာ၊ စိတ်ထားလေးကတော့ အရမ်းဖြူစင်ကြပါတယ်။ ခေါင်းမာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ သိထားရင် သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးက အများကြီးပိုပြီးသာယာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ခေါင်းမာတဲ့မိန်းကလေးတွေက ထိန်းရတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သင်ပြောသမျှကိုတော့ နားထောင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် သေချာတာကတော့ သူ့မှာလည်း သူ့အတွေးနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချချင်သလို …
Total Users : 442234
Total views : 1700474